49 yakaurayiwa mukurwiswa kwemasikiti maviri muna Christchurch New Zealand: Martin Vrijland
49 yakaponda mukurwisana pamasikiti maviri muna Christchurch New Zealand
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 15 March 2019	• 20 Comments
Maererano nevenhau, 49 yakafa mune imwe kurwisa pamasikiti maviri muna Christchurch, New Zealand. Hapana mubvunzo kuti nhamba iyi ichagadziridzwa kumusoro. Izvo zvose chikamu chechivhiringidzi chakakomberedza kushanda kwakadaro kwepfungwa kunokonzera vanhu kutya nekutya. Iye zvino ndiyo inotenderera yevaMuslim nekurwa. Kukakavadzana pakati pemapoka evanhu kunowedzera kukanganiswa. Hazvingavi zvinogoneka kuburikidza incitement kubudikidza vezvenhau manyepo kuti nyika anoedza kuisa makakatanwa pakati kuruboshwe nezvakarurama nezvechii, ipapo anoda kurwisa kwakadaro vamwe mugumisiro.
"Asi Martin Vrijland, iwe hausi kuzotaura kuti kurwisa uku kwakaipa?"Handingatyi kutaura izvi pasina chokwadi. Chinhu chimwe chete chandinogona kutaura ndechekuti kurwisa kwakadaro kunobatsira kukurudzira mapoka evanhu kurwisana. Masangano ezvematongerwe enyika nechekurudyi uye mapoka achakwanisa zvakare kushandisa izvi. Nenzira, kushorwa kwakadaro kunoda mamwe mapurisa-hurumende, uye sezvinonzi inowanikwa pasi rose mune zvenhau, vagari vemunyika yose vachazofara zvakare kuti vazhinji "vanopesana nekutyisa" vatorwa. Tinokwanisa zvakare kugutsikana kuti ma PC edu ari kutora i-pads uye mafoni ekushandisa dhemashoko makuru uye tinogona kufara nemakamera ose uye masuo ekuchengetedza anoiswa kwose kwose. Tichabvuma mapurisa edu enyika anofara uye agutsikana zvakare!
Tisati tamboenda mberi uye mutongi. Tarisa kuti chii chinonyanya kuwanikwa kuti utambe vanhu vane hype media uye zvibvunze: Tinogona here, munguva ino kana pane dzakasiyana-siyana zvehutano huripo huripo, uve nemufananidzo mumwechete wezvatiinazvo mune zvevhidhiyo? kuona vhidhiyo vachiwana kuvimba?
Hapana chimwe chezvinhu zvatinoona paTV inoda kuva yechokwadi kubudikidza. Kutenda kuti izvo zvinyorwa zvinokuudza iwe ndezve 'chokwadi', hachisi chinhu chinopfuura 'kutenda' kunobva pane kuvimba. Iwe unovimba kuti vhidhiyo ichakuratidza chokwadi uye kuratidza nhau dzisiri dzakaita. Zvisinei, kana tikacherechedza mabhizinesi evapfumi mumaoko emakambani ezveshau, tinogona kunge tisingatyi. Asi isu tinoda kuti titende mufundisi muchechi. Kungofanana nemuprista uyo akashandisa vana zvisina kunaka. Tinoramba tichivimba nechechi. Izvo zvinoshandawo kune vhidhiyo here?
Hatidi uye hatigoni kutenda kuti vanogona kutitamba isu nemabasa makuru ekufunga kwepfungwa kuti tive nemanzwiro pakati pevanhu mune chinangwa chinoda. Muzvisikwa, polarity nguva dzose inotungamirira kune ikozvino mune chinangwa chaunoda; sezvinongoita bhatiri ine zvinyorwa uye zvisingatauri, izvo iwe unogadzira ikozvino. I-elitist top layer (iyo ine mhizha muhomwe yayo) ine nzira dzose dzayo dzayo kuti iite iyo polarity. Vanoda "Pegida kurwisana naArifa", yakasiyiwa kurudyi, chiKristu ichirwisana neMuslim, nezvimwe zvakadaro. Kuisa saizvozvo kunoumba hwaro hwemhirizhonga uye kubva kune mhirizhonga iyoyo vanogara vachigadzirisa hurongwa hutsva, umo huwandu hwekuisa simba kwechigaro nguva dzose hunoguma. (Verenga zvakare pasi pevhidhiyo)
"Hungu, asi ini ndichiri kuona kubvunzurudzwa kwechokwadi nevanhu chaivo vari kushungurudzika uye ini ndinonzwa kubva kumhuri neshamwari kuti vanoziva vanhu vakafira mukurwisa kwakadaro". Hatigoni kuzvidzora zvose. Saka zvinogona kuva zvechokwadi, asi zvinogona kunge zvisiri izvo. Ngatiti ichishanda chepfungwa kuti iwedzere kukanganisa (hutsika) pakati pevanhu, saka iwe unogona kuzviita kuburikidza nemichina yefirimu (AI, artificially intelligent software solutions) kana kungoitwa nehutman anokonzera ropa. Izvo ndezvechokwadi zvichiri kukwanisika kuti kurwisa kwakadaro ndeyechokwadi uye kwechokwadi. Ndinongokutaurira kuti haukwanise kugona zvakashata izvo zvinyorwa zvinokuratidza iwe. Nhoroondo yekare, tinogona kutaura kuti vhidhiyo haina chaicho chaicho chakanaka.
Vhidhiyo iri pamusoro apa inoratidza kuti iwe unogona sei kubvisa marudzi ose emifananidzo kuburikidza nemagetsi machena kwemakumi makumi emakore. Zvisinei, nemapurogiramu ezuva ranhasi iwe unogona kuenda mberi kakawanda. Semuenzaniso, unogona kuumba zvisizvo zvisingaiti zvachose pasina chinhu (ona vhidhiyo yekutanga pasi apa). Ipapo iwe unogona kupa mabvunzurudzo anogara mazviri nezviso izvo zvakasikwa, izvo zvinoratidzika semunhu iyeye aripo. Iwe unoita zvekupedzisira kuburikidza nehutachiona hwehutachiona software (ona vhidhiyo yechipiri). Unogona here kufungidzira kuti ungashandisa sei shanduro ye 3 software inoratidzwa pano kuti uite mibvunzurudzo mumugwagwa kubva kune vanhu vasipo? Iwe unogadzira munhu asiripo (yakadzika fake), shandisa vhizha remavara kuti uise mumwe munhu pachiitiko chemhosva uye ushandise chiso chekuonazve kwemaitiro kuti uise chiso chitsva paimira-mumutambi. Iwe unogona kugadzirisa chiso chako nezwi kuti unyeve uye pasina nguva iwe une hurukuro yakanyanyisa yakaipa neuchapupu husina huripo pedyo nekurwiswa kwakaipa mumugwagwa. Zvechokwadi: iwe unogona chaizvo kuisa zvinhu zvose muchiitiko chakakwana. "Hongu, asi pane zvapupu, zvakarurama? Kune vanhu vanoti vanoti vanoziva vanhu? Zvechokwadi kune mapurisa ose nevashandi veku ambulensi varipo?"Nokuda kweiyo mune zvose zvakadzika fake media media profiles uye vamwe vose vanoda chaizvo kuwana zvishoma zvishoma kune 'chinangwa chakakwirira'.
Hungu, kurwiswa kwakadaro kungave kwakangoitika chaizvoizvo, asi urombo kuti kutenda kwangu mufundisi, pedo mupristi uye mhizha haisi chikuru uye saka ndinokuudza iwe zvingangodaro kushanda kwepfungwa mushure mokunge kuputika kwemashoko. Iwe unofanira kuziva zvaunotenda.
(Verenga nyaya yekutevera nemifananidzo yekudhonza pano)
Attack Zvakanaka pazororo renyika "Le Quatorze Juillet" kupemberera French Revolution
CIA yaCharlie Hebdo inofanira kukwidza kuwedzera mu "Muslim terror" nekaroto itsva
Kufanotaura kwehugandanga kweBill Cooper uye Prince kwakabuda
Tags: kurwisa, christchurch, misikiti, misikiti, masikiti, New Zealand, kutya, kugandanga kwegandanga, ugandanga, two
15 March 2019 pa 13: 57
Ndakaona vhidhiyo iyi inouya ... haazive kuti ndiani iye aripo, asi kungoita zvinyorwa
16 March 2019 pa 02: 48
15 March 2019 pa 14: 04
"Ropa rakanga riri kuputika pamusoro pangu ..." akadaro murume ane bundu rakachena uye chiso chakachena zvachose
16 March 2019 pa 03: 07
Chinetso, Kuita, Kugadzirisa ani zvake?
15 March 2019 pa 15: 14
Kana ini ndisina kukanganisa, Christchurch aivewo mumashoko makore mashomanana apfuura. Handizivi chikonzero nei zvakare. Pane kushamwaridzana here? Pamwe une mukana wekutarisa izvi.
15 March 2019 pa 15: 38
Paiva nekudengenyeka kwenyika nenguva uye zvivakwa zvakagumburwa ...
15 March 2019 pa 15: 41
Uyezve kumwe kudengenyeka kwenyika:
15 March 2019 pa 15: 51
Inoparadzanisa zvakanaka kubva kune zvinoitika panguva imwe chete uye izvo zvinotungamirirwa nevhidhiyo zvinotarisa ...
Vari kushingaira kuita basa raAlbert Pike rinoronga.
15 March 2019 pa 17: 04
Idd + iwe une Ides yako yeChitrus rinotarisa zuva rinotevera rinofadza ndi 22-3
15 March 2019 pa 17: 53
15 March 2019 pa 16: 52
Ndinonzwisisa kuti vatadzi vanoverengeka vakasungwa sevanokanganisa. Zvinoshamisa kana kuchava nechinangwa chemhosva chevanhu chinoratidza mararamiro uye zvinangwa. Hazvisizvo kuti mumwe kana vamwe vevasungiridzi vaimhanyirwa nemishandiro ezvidziviriro kana kuti ivo pachavo vaipinda. Iwe unowanzoona kuti munhu akadaro akasunungurwa nokukurumidza uye kuti hausisiri kunzwa kubva kumunhu iyeye.
Hatingazowani kana tikazomboona kana iwe uine zvakanaka 'masayendisiti' uye vatongi muNew Zealand sezvakanyorwa mumiland, Netherlands.
15 March 2019 pa 19: 03
Mhedziso yenhema yenhema nehurongwa hweSIS?
"Hapana boka rakarayira kurwisa kwangu, ndinoita chisarudzo ini. Kunyangwe ndakasangana neReborn Knights Templar zvakare nokuda kwechikomborero mukutsigira kurwiswa, kwakapiwa. "
aurora0026 akanyora kuti:
15 March 2019 pa 21: 06
Handinzwi chero chinhu pamusoro peBoing 737 Max zvakare, zvingadaro sei? Zvinoratidzika kuti mumwe munhu anoda kudzivirira Boeing nevaridzi varo.
15 March 2019 pa 21: 54
Mazuva ano zviri nyore kupisa madzinza ose. Vaiwanzoita zvakafanana, zvino zviri kukurumidza zvikuru.
PaUri iwe unoona nyaya imwechete, vechidiki vechiKristu avo vanoiswa kune zvakanyanyisa kurudyi nemigumisiro yese iyo inosanganisira. Kurwisa kweNZ kunokonzera manzwiro akawanda. Vanhu vanoziva kuti isu tiri kutambidzwa tinovaisa mubhokisi rimwechete mune zvevhidhiyo semuipi uyu.
Hapana anoshamisika kana iwe usina maskiti muAustralia kupfura vaMuslim, kwete Kristu-chechi inonzwika zviri nani. Nokuti iri kurwisa kwaKristuchurch kune vaMuslim. Kungofanana neUkk ane ushamwari anonzi anorwisa Marocain. Iwe unowana sei zvombo zvakawanda zvakadaro mudu yako munyika umo zvombo zvose zvakanyoreswa?
Zita remunyori wenyaya ### Elfie ### el- kunyange (nguva yakadzika kwazvo) hwamanda = rwamanda = hwamanda zvose zvichaitika.
Kana ndikaverenga mhinduro dzose ipapo vazhinji vanotungamirirwa nefairies ###
16 March 2019 pa 06: 51
Ndeipi kupi mukomana weC28 wokuzvarwa akawana mari yokutanga kuenda kuEurope uye anoshanyira nyika dzakasiyana-siyana ikoko kuti ape pfungwa dzake uye ruvengo. Zvadaro munyoro uyu anogona kuwana mararamiro kwemwedzi mishomanana muDunedin, anova nhengo yebhodhi rekupfura uye obvarura motokari kuti aite chiito chake? Munhu akadaro anotora sei kadhi rechikwereti.
Chinhu chinondinyorera zvakanyanya ndiyo nguva pakati pekuputika kweviri. Ndanzwa 11 maminitsi uyewo 7 maminitsi. Chikamu chiri pamusoro pe6 km, asi iwe waverenga kubva mumusikiti wekutanga mumotokari uye ipapo kure, motokari yemotokari uye musikisi inotevera zvino nguva ino yakareba yakakwana. Nokuti ndinorarama pano ini, ndaida kutora nzira nhasi. Zvinosuruvarisa, migwagwa yakawanda yakapoteredza musikiti yekutanga kupfura yakangovharwa. Kunyange zvakadaro, munguva yevhiki ndinoda kuedza zvakare kuona kana iyi 6 km inogona kuvharwa mukati memaminitsi e7 (musi weChishanu manheru).
16 March 2019 pa 07: 30
Inofadza! Rambai takaziva ..
16 March 2019 pa 08: 36
Zvinoshamisa zvakare ndezvokuti mumavhidhiyo aya ane ikamera pamusoro wake, anodana vose uye anodzoka kuti adzokere zvakare kuti ave nechokwadi chokuti vakafa zvechokwadi. Mune imwe musikiti kune vanhu vakawanda vakakuvadzwa, vazhinji vavo vari kuvepa firimu uye vanogara pafoni dzavo. Zvinoratidzika kwandiri kuti haubati foni yako mumamiriro akadaro. Iwe uri kuzobatsira hama dzako, chaiko?
16 March 2019 pa 14: 19
Ingangodaro ichitarisana nekukwikwidza kwevhidhiyo kuti ive yekutanga kuudza nyaya. Asi kana ichokwadi, ndeyehupenyu hwevanhu (vane mhuri, nezvimwewo).
- zvinyorwa zvemashoko (mamwe mhizha, PM, etc.) Unotarisira kuti mapurisa ape ruzivo pamusoro pevana vanoparadzwa uye vamwe.
- nhamba yevanhu vakaurayiwa vakachinja mumamiriro ezvinhu akaoma. Vakawanda vakafa pane kukuvadzwa nenzira.
- Mufananidzo nehombodo
- "Zviremera hazvina kusimbisa hutano hwake, nokuti iye anofanira kuonekwa mumatare musi weMugovera uye ari pamutemo achiri munhu ane mhosva."
- 'Mutungamiri wemakore 28 Brenton Tarrant akasungwa uye akapomerwa mhosva yekuponda (0700 awa Mugovera NZ nguva)
- "Maflosve akawanikwawo akabatanidzwa kune imwe kana kupfuura motokari." (?)
- "Gurukota rezvematongerwo enyika Jacinda Ardern rakambomira pamusangano wehurukuro kuti mutambi wacho aine vavariro dzinopesana" (zvimwe nguva isati yasvika)
- Inofanirwa kunge yakave neropa guru ... harisi pachena
- "Mutungamiri weNew Zealand, Jacinda Adern, akatya. Akataura nezve "zuva rakasviba" uye akanga asina mubvunzo: ichi chaiva kurwisa kwegandanga. " (nguva isati yasvika kune PM)
- "Maererano nesangano reSyria, zvishoma nezvishoma 1 Syrian yakafa." (akaparadzanisa tsime)
- "Panozovewo nevana vanoverengeka pakati pevarombo. Maererano nemashoko ekutanga, izvi zvinonyanya kukanganisa vana veSyria. '(kufungidzira, handizvo here?)
- 'Vana vake vakatanga chirongwa chekubhadhara mari kuviga baba vavo muA Afghanistan. '(nokukurumidza)
- "Maererano nenzvimbo yepaIndaneti inobva kuBangladesh neBDNews24.com, iyewo akaurayiwa panguva yekurwiswa kwegandanga. "(akaparadzanisa chinyorwa)
- "Maererano nesangano reSaudi rinonzi Al Arabiya, Mohsen al Muzaini akakundwa nekukuvara kwake. "(akaparadzanisa chinyorwa)
- "Mumwe mwanakomana weHadhafi achiri kutadza." (kwete mumusangano, kana nhamba yevanhu vasingazivikanwe zvakadaro?)
16 March 2019 pa 14: 31
... uye zvechokwadi kusava nehanya nevanhu vose avo vanofa nezvifo zvinodzivirirwa nenzara. Hapanazve nyaya ...
16 March 2019 pa 16: 06
Zvandinonzwisisa ndezvokuti mutadzi ndiye nhengo ye Knights Templar (Freemasonry) uye angadai akambotaura kuti nhengo shomanana dzesangano raanenge ari yake ndeyekare vevaSerbian (varwi vehondo) veteran. Ini ndoga, ndinofunga kuti kurwisana kweKosovo (mukuona kwezvinoitika zvezvematongerwe enyika) kunogona kupera mumwedzi inotevera.
« Kukurumidza kukudana!
Video footage of shooter Brenton Tarrant (live stream) Christchurch New Zealand »
Agnes Jonckheere op Iyo muraraungu inomiririra chinamato chakanyanyisa ivo vatsigiri vachifunga kuti vari kurwira 'kusiana uye kubatanidzwa'
Danny op Kuchave nemisoro ichizungunuka mune yeJeffrey Epstein kesi?
Wilfred Bakker op Iyo inofungidzirwa foramu for Democracy (FvD) tsananguro
Camera 2 op Iyo inofungidzirwa foramu for Democracy (FvD) tsananguro